Property Manager | Salomon Myanmar Co., Ltd. ﻿
5.8.2019, Full time , Construction / Building
Company: Salomon Myanmar Co., Ltd.
Salomon Myanmar Companyသည် Constructionလုပ်ငန်းများ၊Trading လုပ်ငန်းများနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသောCompany ဖြစ်ပါသည်။ .
•	Good communication and interpersonal skill.
•	Good Coordinating among tower owner and tenants.
•	Must be University Graduate and age between 35 to 45 years old.
•	Must have minimum4years experiences in related field.
•	Good knowledge in administrative task.
•	Good problem solving skill.
•	Excellent in English (4) skills.
Work location 224/A, 7th Flr, U Wisara Rd., SBC Tower,Bahan,Yangon.
Job posted: 5/8/2019
22 Days, Full time , Construction / Building
•	လူမှုဆကျဆံရေးကောငျးမှနျပွီး အသငျးအဖှဲ့ဖွငျ့ဆောငျရှကျနိုငျရမညျ။ •	နစေ့ဉျလုပျဆောငျရမညျ Hosekeepingနှငျ့ပတျသကျသညျ့ လုပျငနျးမြားအား လုပျကိုငျနိုငျရမညျ။
Salomon Myanmar Companyသည် Constructionလုပ်ငန်းများ၊Trading လုပ်ငန်းများနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသောCompany ဖြစ်ပါသည်။
M & E Assistant
•	Building တဈခုလုံး၏ေ၇၊ မီး၊ Air-Con မြား ပွငျဆငျထိနျးသိမျးခွငျး လုပျငနျးဆောငျရှကျနိုငျရမညျ။ •	သကျဆိုငျရာ လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံ (၁) နှဈနှငျ့ အထကျရှိရမညျ။
Site M & E Engineer
32 Days, Full time , Construction / Building
•	Able to read and understand about International Drawing & Material knowledge. •	Manage the project schedule
•	ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျသူဖွဈရမညျ။ •	အခကျအခဲပွဿနာမြားကို ကောငျးမှနျစှာ ညှိနှိုငျးဖွရှေငျးနိုငျရမညျ။ •	လကျအောကျဝနျထမျးမြား၏ အရညျအခငျြးနှငျ့ ကိုကျညီစှာ လုပျငနျးတာဝနျမြားအား ခှဲဝသေတျမှတျပေးနိုငျရမ ...
57 Days, Full time , Construction / Building
•	Must – Strong Communication Skills, Good Interpersonal Skills, Strong Analytical Skills, Good Presentation Skill •	Able to manage all aspects of the contractual and financial side of construction projects.
•	Construction Company တှငျ Office Staff ရာထူးဖွငျ့ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သူအား ဦးစားပေးမညျ
73 Days, Full time , Construction / Building
•	လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်စာရင်းများရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Excel Software ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	စာရင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးတိကျမှန်ကန်စွာရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Trading အကြောင်းနားလည်ရမည်။ •	အခွန်အကြောင်းနားလည်ရမည� ...
•	Bachelor degree in Business Accounting/ B.Com/ LCCI- III/ ACCA/ ACP Holder •	Age between 30 and 40. •	At least 3-5 years working experience in Accounting/Finance field. •	Good Microsoft office skill or experience with accounting software must have. •	Can fully communicate in English.
94 Days, Full time , Construction / Building
•	ဘွဲ့ရှိပြီးသူ၊ အသက် (၂၅) နှစ်မှ (၃၅) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	Computer Excel အား ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအ တွေ့အကြုံ ရှိသူအား ဦးစားပေးမည်။
99 Days, Full time , Construction / Building
•	Computer Software, Hardware ပိုင်း ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	Networking, System Installation နှင့် System Error များ အားများ ကျွမ်းကျင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ် နှင့် အထက်ရှိရမည်။
124 Days, Full time , Construction / Building
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမန်ွသူ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ
M & E Technician
•	Excellent planning and organising skills •	Able to resolve problems inatimely manner •	Due to work nature, male candidate will be more preferable
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အခက်အခဲပြဿနာများကို ကောင်းမွန်စွာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အခက်အခဲပြဿနာများကို ကောင်းမွန်စွာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ •	လက်အောက်ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီစွာ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးနိုင်ရမည ...
•	Good communication and interpersonal skill. •	Good Coordinating among tower owner and tenants.
284 Days, Full time , Construction / Building
•	လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်စာရင်းများရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	စာရင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးတိကျမှန်ကန်စွာရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။
•	ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနိုင်ရမည်။ •	ကားကြီး/ကားသေးမောင်းနိုင်ရမည်။ •	Auto/Manual Gear နှစ်မျိုးစလုံးမောင်းနိုင်ရမည်။ •	စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မောင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လု ...
299 Days, Full time , Construction / Building
•	လူအများနှင့် တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	Must have good personality and communication skill. •	Can work at Hlaing Tharyar Tsp. (We can offer meal and hostel.)
300 Days, Full time , Construction / Building
•	Must have good personality and communication skill.
301 Days, Full time , Construction / Building
Property Manager Construction / Building Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon JobsInMandalay Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Construction / Building Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Aung Pyi Tan Co.,Ltd
Bravo Paints LTD
Yangon Region 39 Days
Yangon Region 41 Days
Yangon Region 124 Days